Apple Maps‌ ee Nederland waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo sheegto shilalka gaadiidka | Waxaan ka imid mac
Apple Maps‌ ee Nederland waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo sheegto shilalka taraafikada
Khariidadaha Apple waa mid kale oo ka mid ah adeegyada Apple oo sii wadaya inay si joogto ah ugu daraan horumar iyo laga bilaabo maanta adeegsadayaasha codsigan khariidadaha Apple ee Nederland ayaa soo sheegi kara shilalka gaadiidka intaad waddo ku jirto.
Nooca Khariidadaha ku jira macruufka 14.5 wuxuu ku daray astaamo cusub adeegsadayaasha Mareykanka uga dig dadka kale dhibaatooyinka ka jira waddada oo sababay waqtigii loogu talagalay. Dhacdooyinkani waxay asal ahaan noqon doonaan khataro, shilal ama dhacdo kasta oo aan caadi ahayn sida shaqooyinka dhismaha ama wixii la mid ah.
Hadda isticmaaleyaasha Apple Maps‌ ee Nederland, waxay durba leeyihiin hawshan si ay uga digaan darawalada kale khatarahaan iyo dhibaatooyinka waddada iyo waliba sida ku xusan dhexdhexaadinta iCultre, shirkadda Cupertino waxay sii wadi doontaa ballaarinta noocyada shaqooyinka iyo kuwa kale waxay jecel yihiin xadka xawaaraha ee waddada iyo kuwa kale.
In muddo ah hadda, hagaajinta Khariidadaha Apple waxay ahayd mid joogto ah laakiin kiiskan shirkaddu kuma darto ikhtiyaarkan adduunka oo dhan waxayna u fulineysaa si yar. Shaqaynta si loo soo sheego dhibaato ayaa ka jirta dhammaan dalalka, laakiin in laga digo dhacdo gaar ah ma aha. Hadda waxay hadda ku firfircoon tahay Nederland, Mareykanka iyo ShiinahaWaan arki doonaa inta ay qaadanayso in adeeggan laga bilaabo waddamada intiisa kale. Waxay u noqon kartaa mid xiiso leh isticmaaleyaal badan oo sameeya waddo isku mid ah maalin kasta waana in digniinta shilku ay tahay mid fudud, waxaa lagu samayn karaa Siri si toos ah ama iyadoo la adeegsanayo menu Maps «Dhibaato soo sheeg».
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Maps‌ ee Nederland waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo sheegto shilalka taraafikada
Sida laga soo xigtay Kuo, shixnadaha MacBookga ayaa kori doona mahadnaqa miniLED